Angon-kevitra Raharaha Mafana Aogositra 2017
2017-08-31 @ 08:07 in Ankapobeny
Noho ny fivoahan'ny hevitra ao amin'ny media sosialy dia toy ny nitsaha-ketrika ny taty amin'ny bilaogy. Fantatsika rehetra anefa fa mora tsy hita izay hevitra mivoaka ao amin'ny Facebook ohatra. Fantatsika fa navoakantsika ilay hevitra, nefa mety tsy ho hitantsika intsony izay nalehany. Tsy dia mety eo amin'ny fandraketana ny tsiaron'ny tantara izany anondroana fa tsy azo tsinontsinoavina hatrany ny bilaogy, izay mahatahiry ny zavatra tokony hotehirizina amin'ny ankapobeny.
Maro ny zava-nitranga teto amin'ny firenena tamin'ity volana ity, saingy toy ny mahazatra dia tsy nisy tohiny ireo rehetra mahaliana sy nahabe resaka ny besinimaro. Ohatra iray amin'izany ny nahatrarana fahitalavitra manify efijery miisa 1400 mahery naondrana teto Madagasikara nefa nolaingana ho lamba ireo fahitalavitra ireo. Raha ny fahafantarako azy dia toa miditra maimaim-poana amin'izao fotoana ny lamba fripy, dia izay no anararaotan'ny sasany tsy te-handoa haban-tseranana ho lamba fripy ireo entana hafa mandoa haba mihoam-pampana. Ny zavatra toy izao no mampanontany tena amin'ny fiarovana ny mpanitsakitsaka ny lalàna. Rehefa ny olon-tsotra no voampanga dia aranty ny sary fa ny masony ihany no afenina, dia izay mety ho mahafantatra azy ihany no mahafantatra, saingy matetika dia mivoaka an-gazety ny anarany. Fa rehefa ny goavana kosa no tratra amin'ny hosoka ataony dia tsy misy na inona na inona ahafantarana ilay nandika lalàna. Ny mpanara-baovao anefa dia mahita any amin'ny firenen-kafa ireo fahatafintohinana mahazo ireo orinasa goavana toy ny Samsung rehefa tratra nanao kolikoly ry zareo. Avoaka mihitsy ny anarany mba tsy ahafahany mibolilalila sy tsy ahafahany manindry avy any ambadika hanery ny hafa tsy hamoaka ny anarany. Volabe tokony hiditra amin'ny fanjakana hampiodinana ny raharaham-panjakana ihany koa izany.
Fa ny eto amintsika kosa, raha ny fijery azy sy ny tsy fahafantarana ny tohiny intsony, dia toy ny hoe (averina tsara hoe toy ny hoe) andrasana fotsiny ilay orinasa handoa ekôlazy, vola miditra amin'ny mpiasam-panjakana ambony afaka mamaha ny raharaha izany fa tsy misy vola miditra amin'ny fanjakana kosa na raha misy dia kely monja. Vola mazava loatra fa ambany noho izay tokony aloany saingy tsy kely fa mampanankarena kosa izay mandray azy. Dia raha mbola minia mikimpy tsy mety mandoa ilay orinasa vao mety (fa tsy voatery) havoaka ny anarany, saingy raha ny fahamailoan'ny mpanao bizina dia heveriko fa voaloa haingana ny vola dia samy mangina ny rehetra. Afa-mivoaka tsy misy raorao mankany amin'ny nanafatra azy ny fahitalavitra ary afa-po ilay na ireo mpiasam-panjakana nahazo ny vola. Hevitra sy ahiahy ireo ambarako ireo fa tsy voatery izay no marina, fa ny hany takiana dia hoe rehefa ny goavana rangahy no tratra tahaka ireny dia ambarao ilay orinasa na dia mety ho orinasa anarany fotsiny iafenan'ny orinasa tena nanao azy aza ilay izy farafaharatsiny a! Raharaham-bahoaka ireny tokony ho tafiditra any amin'ny volam-panjakana fa tsy lasa volan'olon-tsotra manana toerana ambony eto amin'ny firenena.
Ny zavatra faharoa tiako lazaina indray dia ny raharaha famonoana ilay kaonsilin'i Malezia (teo aloha?) sady tompon'ny orinasa Z&Z Center ihany koa. Misy ny mieritreritra fa mety misy ifandraisany amin'ny raharaha voalaza etsy ambony ity raharaha iray ity, nefa tsy voatery ho izay. Misy ihany koa ny mieritreritra fa "reglements de comptes" amin-dry zareo samy karana, na samy manambola, na samy "jiolahy" iny raharaha iray iny. Misy manko ny manaparitaka fa sady efa niharan'ny fakana an-keriny izy no efa voaroiroy ihany koa amin'io fakana an-keriny io ihany koa... izay no mahatonga ilay eritreritra hoe misy fifamaliana faty angamba ao ambadika ao.
Fa ny isarihana ny sainao kosa dia ilay filazana hoe "kaonsily honorera", betsaka amin'ny mpandraharaha be vola eto an-toerana no naka io "voninahitra" ho "kaonsily honorera" io indrindra fa nanomboka tamin'ny taona 2009. Toy ny hoe mahazo tsi-fisaziana maha-diplaomaty rehefa mahazo io voninahitra io ka afaka manafatra "entana diplaomatika" nefa mifandraika akaiky amin'ny fihariana atao izany ary tsy azo melohina eto amin'ny firenena raha tratra manao fahadisoana. Maka fiarovantena mety hanohintohina fifandraisan'ny firenena roa tonta ry zareo raha sanatria misy mikitikitika an-dry zareo. Mihamivoatra ny fiarovan-tenan-dry zareo nefa tsy mitodika loatra any amin'ny tombontsoan'ny Malagasy izany araka ny fijeriko manokana. Izay zava-droa loha izay ihany no resahina aloha fa efa lava dia lava mety ho tsy voavakinareo intsony aza izay voasoratra izay.
Jentilisa, 31 aogositra 2017 amin'ny 08:05